Version 0.8.5 – Anyị na-akwado Lao oke
September 17, 2012 site na rịọ Ahapụ a Comment
A frog na òké gị Laos
Ọfọn, Google nnọọ mara ọkwa na ha ịsụgharị blog na ha ga-akwado Lao, na ukara asụsụ Laos, N'ihi ya, anyị nwekwuru koodu chọrọ ma a ngwa-ufụn na-akwado nke a asụsụ, nke a na-akwado Otu Oge Awa Translation.
Edikabade bụ ugbua maka ụbọchị ole na ole ma ezigbo nsogbu na-echefu ihe a post-ebi ndụ e-achọta foto. Anyị na-abụghị ndị ezi n'aka na ọ bụ ihe kasị kwesị ekwesị na foto, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ rhymes.
Kporie ọhụrụ a version.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi, Hapụ ọkwa Akpado Na: google ntụgharị, obere, ọzọ asụsụ, tọhapụ